Grace ny mpampianatra tsara indrindra - Church of the World of God Switzerland
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2019-03 > Misaora ny mpampianatra tsara indrindra
Ny tena fahasoavana manafintohina, dia manafintohina. Ny fahasoavana dia tsy manala tsiny ny fahotana, fa manaiky ny mpanota. Toetran’ny fahasoavana no tsy mendrika izany. Ny fahasoavan’Andriamanitra no manova ny fiainantsika ary izany no tena fototry ny finoana kristiana. Maro ny olona mifandray amin’ny fahasoavan’Andriamanitra no matahotra sao tsy ho eo ambanin’ny lalàna intsony. Mihevitra izy ireo fa hitarika azy ireo hanota bebe kokoa izany. Niatrika izany fomba fijery izany i Paoly ka namaly hoe: “Ahoana izao? Hanota va isika, satria tsy ambanin’ny lalàna, fa ambanin’ny fahasoavana? Sanatria izany!" (Romana 6,15).
Vao haingana aho no nahare tantara iray nahatonga ahy hisaina ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny tohiny. Indray maraina dia nisy raim-pianakaviana iray sy ny zanany niditra tao an-tanàna. Nipetraka tany amin'ny toeram-piompiana 40 km avaratr'i Durban, any Afrika Atsimo izy ireo. Tian'ilay raim-pianakaviana hiambina ilay fiara ary miasa any amin'ny ilany tanàna. Rehefa tonga tao an-tanàna izy ireo dia navelan'ny rainy ilay zanany lahy hanao asa aman-draharaha. Nodidiany ny zanany lahy hitondra fiara ao anaty garazy izay nanoratany ny serivisy. Noheverina fa handeha hamonjy ny rainy izy rehefa avy nanamboatra ilay fiara taorinan'ny fiara rehefa niverina.
Nentin'ny fiara tamin'ny alàlan'ny fiara ny zanany ary efa vonona ny nangonina ny fiara tamin'ny tolakandro. Nanamarina ny famantaranandrony izy ary nihevitra fa handeha hijery sarimihetsika manodidina ny joro mihetsika izy alohan'ny hisintonana ny rainy. Mampalahelo fa ity flick ity dia iray tamin'ireo horonan-tsary mahaliana izay nandeha nandritra ny adiny roa sy sasany. Nony tonga izy dia efa milentika ny masoandro.
Etsy an-dafin'ny tanàna dia nitaintaina ny rainy. Niantso ny garazy izy mba hahitana hoe aiza ny zanany lahy. Fantany fa nandeha nandeha ora vitsivitsy talohan'izay ilay zanakalahy (izany dia tao anatin'ny andro talohan'ny finday). Rehefa maizina ny andro dia tonga naka ny rainy ilay zanaka lahy.
Taiza ianao Nanontany ny raim-pianakaviana. Koa satria tsy fantatry ny zanakalahy fa efa nantsoin-drainy ny garazy dia hoy izy namaly: «Naharitra elaela tao anaty garazy izy ireo. Rehefa tonga tany aho dia efa sahirana tamin'ny fiara hafa izy ireo. Nanomboka niasa teo amin'ny fiaranay »izy ireo taty aoriana. Izy dia nilaza izany tamin'ny endriny matotra izay mety hinoan'ny rainy ity lainga raha tsy fantany ny marina.
Nahatsapa alahelo ilay raim-pianakaviana hoe: «Anaka, nahoana no nandainga tamiko ianao? Nantsoiko ny garazy ary nilaza tamiko izy ireo fa niala andro vitsy lasa izay. Nosoratanako ianao mba hanao ny marina. Toa tsy nahomby intsony aho. Izao dia handeha an-trano hody aho ary hahita izay tsy mety nataoko tamin'ny fitaizako, izay nahatonga ahy handainga ahy toy izany ».
Tamin'ireny teny ireny dia nihodina izy ary nandeha 40 km an-trano! Nitsangana teo ilay tovolahy, tsy fantatra izay holazaina na hataony. Rehefa nahatsiaro tena izy dia nanapa-kevitra ny handeha moramora tao aorinan'ny rainy, nanantena fa hanova ny sainy izy ary hiditra anaty fiara. Ora maro taty aoriana dia niditra tao an-trano ilay raim-pianakaviana ary ilay zazalahy izay nanaraka ny rainy tamin'ny fiara nandeha nandeha fiara mba hihidy ilay fiara. "Nanomboka tamin'io andro io, dia nanapa-kevitra aho fa tsy handainga amin'ny raiko intsony", hoy ny zanaka raha nilaza ny zava-nitranga izy.
Ny ankamaroan'ny olona dia tsy mahatakatra hoe inona no nataon'ny ota taminy. Rehefa fantatrao ny haben'ny toerana dia izany no tadiavinao amin'ny fiainanao.
Heveriko fa tantaram-pahasoavana mahazatra ity. Nanapa-kevitra ny tsy hanasazy ny zanany noho ny nandainga ilay raim-pianakaviana. Nanapa-kevitra ny hitondra ny fanaintainana ho an’ny zanany ho azy anefa izy. Izany dia ny fahasoavana - fahasoavana tsy mendrika akory, hatsaram-panahy, fitiavana ary famelan-keloka. Izany no nataon’ny Raintsika any an-danitra. Rehefa nanota ny olona, ​​dia tena tia antsika Izy, ka nomeny ny Zanany Lahitokana, mba ho voavonjy amin’ny ota sy ny fahafatesana isika amin’ny finoana Azy. Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay (Jao. 3,16). Noraisiny ho azy ny fanaintainana. Mandrisika lainga sy fahotana bebe kokoa ve ny mamaly amim-paharetana ny Ray? Tsia! Ny famaliana amin'ny fahotana dia tsy midika hoe mahatakatra ny zava-nitranga.
"Fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia efa niseho tamin'ny olona rehetra ka mampianatra antsika hiala amin'ny ratsy fanahy sy ny filan'izao tontolo izao ary ho velona amin'ny fahendrena sy ny fahamarinana ary ny toe-panahy araka an'izao tontolo izao." (Titosy) 2,11-12). Raha tokony hampianatra antsika hanota bebe kokoa ny fahasoavana, dia mampianatra antsika handà ny fahotana ny fahasoavana ary hanana fiainana mahafehy tena sy mahitsy ary tia an’Andriamanitra!
Ahoana no anaovan'ny fahasoavana izany?
Tena sarotra ho antsika olombelona ny mahatakatra ny fiantraikan'ny ota sy ny tsy fisian'ny fifandraisana. Tahaka ny mpidoroka zava-mahadomelina izy io, izay simban'ny zava-mahadomelina ny ainy. Raha manome famindram-po ilay raim-pianakaviana ary mamoaka ny zanany lahy avy ao anaty zohy misy zava-mahadomelina, dia tsy azo inoana fa te handray zava-mahadomelina indray ilay zaza raha vao tafavoaka amin'ny laoniny izy mba hahafahan'ny ray maneho famindram-po bebe kokoa. Tsy mitombina.
Rehefa fantatsika ny nataon'ireo Ray ho antsika ao amin'i Jesosy Kristy, inona ny fahotana sy ny ota nataontsika taminao sy izay mbola ataontsika amintsika, ny valin-tenintsika dia tsy misy dikany! Tsy afaka manota bebe kokoa isika hany ka mitombo ny fahasoavana.
Ny fahasoavana dia teny mahafinaritra. Izy io dia anarana tsara tarehy ary midika hoe ilay tsara tarehy na ilay tsara fanahy. Ny rahavaviko dia antsoina hoe Grace. Isaky ny maheno na mamaky ny anarana hoe Grace ianao dia tadidio izay tiany hampianarina anao. Azafady mba tadidio fa ny fahasoavana dia tsy hoe "famonjena" fotsiny, fa momba ny toetra feno fahasoavana sy fangorahana ihany koa amin'ny maha mpampianatra anao hanabe sy hampianatra anao!